बाबुराम सरकारले फागुनको पहिलो साता काट्न पाउँदैन :: कृष्णगोपाल श्रेष्ठ (एमाले नेता) – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
६ कार्तिक २०७७, बिहीबार ०७:०२ English
० तपाईंहरु आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने कुरा गरिरहनुएको छ, कसरी तयारी गरिएको छ आन्दोलनको ?
– लोकतन्त्रवादी पार्टीले गर्ने कार्यक्रम शान्तिपूर्ण तवरको हुन्छ । हामी अरुलाई दुःख नपुग्ने गरी प्रभावकारी आन्दोलन प्रदर्शन गर्न चाहन्छौँ । शान्तिपूर्ण, अनुशासित, मर्यादित र सशक्त ढंगले आन्दोलन अगाडि बढाउँछौँ ।
० तपाईंहरु त सधैं सडकको सडकमै हुनुहुने भयो नि ?
– जनता सडकमा भएन भने त प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता कमजोर भइहाल्छ नि ! जनता जहिले पनि सडकमै हुन्छौँ, सचेतनाका साथ खबरदारी गरिरहेका हुन्छौँ । अहिले त झन् प्रतिपक्षका नाताले जनताको पक्षमा आवाज उठाउन सडकमा हुनु कुन अनौठो भयो र ? अहिलेको परिस्थितिले त सडकमा उत्रन बाध्य पनि बनाएको छ हामीलाई ।
० त्यस्तो बाध्यकारी परिस्थिति के प¥यो नि ?
– लामो समयदेखि संक्रमण व्यहोरिरहेको मुलुक झन् डरलाग्दो संक्रमण प्रवेश गरिरहेको छ, राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको छ, जनजीविका अस्तव्यस्त भइरहेको छ, लोकतन्त्र गुम्ने स्थिति छ, पछिल्लो आन्दोलनले स्थापित गरेको अन्तरिम संविधानको पनि हेर्दाहेर्दै हत्या हुँदैछ । यस्तो स्थितिमा प्रतिपक्षको हैसियतले चुप लागेर टुलुटुलु हेरि बस्न त सकिन्न नि ।
० भनेपछि तपाईंहरुलाई पनि सत्ता चाहियो, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको ओहदा चाहियो, होइन ?
– मुलुकले राष्ट्रिय सहमति खोजिरहेको छ, त्योविना मुलुकको गतिरोध अन्त्य हुँदैहुँदैन । हामी पद, कुर्सी या प्रधानमन्त्री–मन्त्रीका लागि आन्दोलन गरिरहेका छौँ भन्ने ठान्नु गम्भीर दोषारोपण मात्र हो ।
० प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको ठहर त यष्स्तै छ ?
– डा. भट्टराईको विवेक र बुद्धिको खास्टो उघ्रिसकेको छ, त्यसैले उनको आरोपको चर्चा गर्नु नै बेकार छ । उनले यति पनि बुझ्न सकेनन् कि उनलाई अगाडि सारेर उनकै पार्टीका कुनै शक्तिशाली व्यक्तिले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्दैछन् । यसबाट बाबुरामको राजनीतिक भविष्य चौपट हुँदैछ । बेलैमा उनले यो बुझेर नैतिकताका साथ अलग्गिएमा त्यो संवैधानिक पनि हुनेछ र राजनीतिक साख पनि थोरै भएपनि बच्नेछ । होइन भने बाबुरामलाई राम–राम मात्र भन्न सकिन्छ ।
० विपक्षीले पनि भाषण मात्र गरे काम त देखाउन सकेनन् भन्ने आरोप जनस्तरबाटै लागेको छ नि, हेक्का छ ?
– गर्ने भन्ने नाममा ध्वंशात्मक ढंगले उत्रने काम नगर्ने हाम्रो सोच हो, जनताले यसलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ र लिएका पनि छन् ।
० यस्तो चालले बाबुराम भट्टराईलाई सत्ताबाट हटाउन सक्नुहोला त तपाईंहरुले ?
– उहाँलाई हटाउनै पर्दैन, बाबुरामजी यतिबेला रुखमा पाकोको आँपसरह बन्न पुगेका छन्, हामीले यस्सते हल्लाइदिए मात्र रुखबाट त्यो आँप फ्यात्त झरिहाल्छ । त्यत्तिकै हावाले पनि झार्ने अवस्था छ । गलित भएर पाकेको आँपजस्तै हो बाबुरामको सरकार ।
० उहाँले त काँचो–कटमेरो आँप हुँ भनेझैँ व्यवहार गरिरहनुभएको छ त ? सितिमिति हल्लिन्न भनिरहनुभएको छ त ?
– निभ्ने बेलाको बत्ती कसरी धिप–धिप गरेर पावर निकाल्छ भन्ने थाहा छैन ? त्यस्तै अवस्था हो उनको । बाबुराम सरकारको आयु यो माघ मसान्तदेखि फागुनको पहिलो हप्ताभन्दा पर जाला भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यतिबेला सम्ममा बालुवाटारबाट झिटी गुण्टा बोकेर उहाँ निस्किसक्नु पर्छ । त्यसो गर्दा उहाँलाई भविष्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ ।
० त्यसबेला सम्ममा पनि निस्किनुभएन भने ?
– जहाँसम्म मेरो बुझाई छ निस्किनुहुन्छ भन्ने नै लाग्छ । नभए कसरी निस्कनुहुन्छ दुनियाँले देख्नेछन्, त्यसमा टेन्सन नै छैन ।
० होइन, बाबुराम या एमाओवादीले त्यति सजिलै सत्ता छाड्लान् र भनेको ?
– सत्ता त २०–२५ वर्ष नै चलाउँछु, मलाई अकन्टक १० वर्ष देउ भनेर भीक त मागिरहेका छन्, तर प्रक्रियाबाट विधानसम्मत ढंगले आएर जनताले उनी या उनको पार्टीलाई चुनेमा दश के पचासै वर्ष प्रधानमन्त्री रहे पनि मानिदिउँला नि त हामी ।
० प्रचण्डले नयाँ जनवाद होइन अव जनवादी आर्थिक क्रान्तिको कुरा गरौँ भन्न थालेका छन् नि, के भन्नुहुन्छ ?
– प्रचण्ड भनेका एक अत्यन्त धुर्त या छट्टु व्यक्ति हुन् भन्नेमा अब कुनै विवाद बाँकी छैन । मौका पर्दा उनकै पार्टीका प्रधानमन्त्री बाबुरामलाई नै कुन गतिमा पु¥याइदिने हुन् केही ठेगान छैन । यस्ता व्यक्तिले के वाद छोडे के समाते भनेर किन दिमाग खल्बल्याइरहनु ? उनले बोल्ने कुरालाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने उनी जे बोल्छन् त्यो गर्दैनन्, जे गर्ने हुन् त्यो बोल्दैनन् । अहिलेको राजनीतिक संकटको मूल जड नै प्रचण्डको यही चरित्र नै त हो । राजनीतिक रुपमा उनी अलिकता पनि इमानदार भइदिएको भए सायद नेपालीले यो दुर्दिन देख्नु पर्ने थिएन कि !
० उनले जे बोल्यो त्यही हुन्छ नेपाली राजनीतिमा भन्छन् त ?
– वाहियात कुरा हो यो । उनी कस्ता भने दलहरुबीच सहमतिका लागि भन्दै छलफलमा बसेर कुरा बुझ्ने, अनि राजनीतिक दलहरुबीच सर्वसम्मत रुपमा असहमति भएको कुरालाई ठ्याक्क टिप्ने र त्यही असहमति भएको कुरालाई बाहिर आएर मेरो यो नयाँ प्रस्ताव, लौ सबैले मान भनेर बोल्छन् । जुन कुरा लागु हुनै सक्दैन, देश र जनताको हितमै हुँदैन त्यसलाई आफूले विकल्प दिएको भन्दै जनमानसमा बोल्ने उनको हर्कतले मुलुकलाई पाकेर टन्केको घाउजस्तै बनाइसकेको छ । यस्ता धुर्त र बदमास व्यक्तिलाई समयले तह लगाउला ।
१५ माघ २०६९, सोमबार ०९:२८ मा प्रकाशित